Tena > Jersey
siisetra primal Jersey
Fialana akanjo lava Primal - vahaolana azo ampiharina
Ahoana ny fomba anaovan'ny akanjo ba primal? Mba hanararaotana feno ny fananana ara-teknikan'ny akanjonao Primal dia tokony hifanakaiky amin'ny vatana izy io mba hitondrana tsara ny hamandoana hiala amin'ny hoditra mba hanampy anao ho maina sy maina. Milamina tsara ity vokatra ity. Natao mba handraisana sy hilamina malalaka ho an'ny fahatsapana tsy mahazatra.
Nandresy i jersey green peter sagan
Nandresy i Jersey sagan green jersey - ahoana no hamahana azy
Afaka mandresy baoty maintso i Sagan? Saingy ny jirika maintso dia matetika azon'ny talenta iray manontolo miaraka amin'ny fahaizany mamita haingam-pandeha miaraka amina sary sokitra amin'ny famaranana an'i punchier ary koa fandresena fito nataon'i Peter Sagan. 24. 2021.
Inona avy ireo akanjo ba any Vuelta? Ny mpitarika ankapobeny amin'izao fotoana izao dia manao akanjo mavomavo mena, na dia teo aloha aza ny 'Maillot amarillo' (akanjo mavomavo) ary ny 'Jersey de Oro' (Akanjo volamena) ny Espaniola mpifanandrina amin'ilay akanjo mavo an'ny Tour de France.
Akanjo lava avana - ahoana no fomba hipetrahana
Inona no dikan'ny akanjo lava avana amin'ny bisikileta? Ny akanjo jirika Rainbow dia akanjo manokana fanaovan'ny bisikileta tompon-daka eran-tany mandritra ny hazakazaka. Ohatra, ilay tompon-daka tamin'ny hazakazaka amoron-dàlana eran'izao tontolo izao dia nitafy Jersey rehefa nifaninana tamin'ny hazakazaka an-tsehatra sy hazakazaka iray andro, saingy tsy nandritra ny fitsapana ara-potoana.